“Ma jiro wax hishiis ah oo dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo Kenya oo ogolaanaya inay dalka soo galaan, waana tilaabo sharci darro ah” Xildhibaan C/qaadir Sh. Cismaan. – Radio Daljir
Mogdisho, Oct, 20 – Xildhibaan C/qaadir Shiikh Cismaan oo ka mida mudanayaasha baarlamanka Soomaaliya, ahna guddoomiye kuxiggeenka guddiga dastuurka qabyo qoraalka ah, ayaa sheegay inay tahay tillaabo sharci darro ah, in ciidamada dalka Kenya ay soo galaan gudaha dalka Soomaaliya.
Md. C/qaadir ayaa waraysi uu siiyay Radio Daljir si kulul u cambaareeyay xukuumadda Kenya, waxaana uu soo galitaanka qaybo ka mida gobolka Gedo uu ku tilmaamay fargalin qaawan oo aan loo meel dayan. Xildhibaan C/qaadir ayaa isagoo hadalkiisa sii wata waxaa uu yiri “Ma jiro wax hishiis ah oo dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo Kenya oo ogolaanaya inay dalka soo galaan, waana tilaabo sharci darro ah”.
C/qaadir Shiikh Cismaan ayaa tilmaamay inay jiraan sharciyo caalamiya oo ay ku dhaqmaan dawladdaha aduunka ee jaarka ah. Waxaana uu intaasi ku daray in tillaabada Kenya lagu tilmaami karo xad-gudub ay ku sameeyeen sharaftii iyo qaranimadii ka dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, inkastoo ay jiraan jihooyin kale duwan oo mawqifyo iska hor-imaanaya ku cabbiray, soo galitaanka dalka Soomaaliya ciidanka Kenya, ayaa haddana waxaa jira siyaasiyiin Soomaaliyeed oo taageersan tilaabadaan ay ciidanka Kenya kusoo galeen dalka Soomaaliya. Kuna tilmaamay hawlgal lagu soo afjarayo kooxda Al-shabaab.
Masuuliyiin u hadashay dawladda Kenya ayaa iska fogeeyay eedaynta loo soo jeediyay, war been ahna ku tilmaamay in ciidanka Kenya ay gudaha usoo galeen dalka Soomaaliya. Balse Xildhibaan C/qaadir Sh. Cismaan ayaa xuskaday inay arrintaan si toos ah u qiratay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya, oo ay sheegtay in ciidankoodu Soomaaliya gudaha u soo galeen illaa 100km.